Maapụ Synoptic | Network Meteorology
El eserese synoptic (ma ọ bụ nke a na-akpọkwa eserese synoptic) bụ ihe osise eserese nke ọnọdụ ikuku ikuku na ọkwa oke osimiri. Ndị na-ahụ maka mmụta ihu igwe na-adọta isobars nke kwekọrọ na akara nke nrụgide nha anya ọ bụla hectopascals 4 na ọrụ ihu igwe nke mba ụfọdụ (foto kacha elu) na hectopascals 5 ọ bụla na ndị ọzọ (foto ala). Ewezuga isobars a na-adọta usoro ndị dị n'ihu na ebe mgbali elu na nke dị ala na chaatị.
Ugbu a, ka anyị lelee ụfọdụ isi ihe nwere ike ịmata na eserese synoptic:
1. Ndị Isobars
Ha kwekọrọ na akara ndị na-esonye na isi nke nrụgide nke ikuku. Uru nke ikuku ikuku nke na-anọchi anya onye ọ bụla n'ime ha na-egosi na akara. Dịka ọmụmaatụ, na map ojii na ọcha uru nke isobar na-agafe na Balearic Islands bụ 1025 Hpa.
2. Presslọ Ọrụ Nrụgide Dị Ala
Ha kwekọrọ na nhazi nke isobars gburugburu ma ọ bụ obere gburugburu gburugburu ebe ikuku ikuku dị ntakiri. A na-ejikarị mkpụrụedemede B (akara squall) ma ọ bụ L (ala pịa), yana T. A na-ejikọkarị ha na ọnọdụ ihu igwe dị njọ, na mmiri ozuzo na oké ifufe.
3. Presslọ Ọrụ Nrụgide Dị Elu
Ha kwekọrọ na nhazi nke isobars gburugburu ma ọ bụ obere gburugburu gburugburu ebe ikuku ikuku dị kachasị. Ejiri A (nrụgide dị elu) ma ọ bụ H (nnukwu pịa). A na-ejikọ ha na ihu igwe dị mma.
4. N'ihu Nzuzo
Ejiri ahịhịa ndị jupụtara na-acha anụnụ anụnụ mara ha, ha na-egosi nrịgo nke ọtụtụ mmadụ Ikuku oyi nke na-akpata mmiri ozuzo n'ozuzu ma na-agbadata na okpomọkụ mgbe ọ na-eme.
5. Agha ndị na-ekpo ọkụ
Ejiri ahịrị ndị semicircle na-acha uhie uhie, ha na-egosi ọganihu nke otu ikuku ọkụ nke na-akpata mmiri ozuzo na ịrị elu na okpomọkụ n'oge ọ na-eme.
6. N'ihu Ndị Nọchiri Anya
Egosipụtara site na ngwakọta nke akara nke ihu na-ekpo ọkụ na nke ọzọ nke ihu oyi na-acha odo odo. Ha na-egosi akara nke zutere n'etiti ihu oyi na ihu ọkụ. A na-ejikọkarị ha na oké mmiri ozuzo.
Isi: Wetterzentrale, MetOffice
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Maapụ Synoptic
Itinye, ozi ụgha ma mee nzuzu nzuzu
Kedu ihe bụ oke ala?